Boqortooyadda Sacuudiga Oo Aan Ku War-gelin Ra’iisulwasaare Kheyre Sababta Ay Ugu Yeertay (Akhriso) – Idil News
Boqortooyadda Sacuudiga Oo Aan Ku War-gelin Ra’iisulwasaare Kheyre Sababta Ay Ugu Yeertay (Akhriso)
Posted By: Somali Desk October 9, 2018
MUQDISHO(IDIL NEWS)-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Sucuudi Carabiya, kaddib casuumaad uu ka helay Boqor Salman bin Abdulaziz.
Boqortooyada Sucuudi Carabiya ayaa Diyaarad khaas ah u soo dirtay ayaa Ra’iisul Wasaaraha iyo wafdigiisa, taas oo ka qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Warar ay Heshay Warbaahinta Idil News, ayaa Sheegaya in Boqortooyadda Sacuudigu aysan ku War-gelin Ra’iisulwasaare Kheyre sababta ay ugu yeertay, taas oo tuhun ka dhex abuurtay Villa Soomaaliya.
Wararka ayaa intaas ku daraya inay jireen Dadaallo socday Maalmihii ugu dambeeyay, kuwaas oo Xubno ka ka tirsan Villa Soomaaliya oo uu kamid yahay Fahad Yaasiin oo ah Agaasime ku-xigeenka Hay’adda NISA ay ku doonayeen inay ku hor istaagaan Safarka Kheyre.
Ra’iisul Wasaare Kheyre ayaa Sucuudiga waxaa uga billaabanaya booqasho rasmi ah oo laba maalin qaadanaysa, waxaana safarkiisa ku wehliya Wasiirrada Warfaafinta, Arrimaha dibadda iyo ganacsiga iyo xildhibaanno.
Ilo lagu kalsoon yahay ayaa Sheegaya in Madaxtooyadda Villa Soomaaliya, ay ka cabsi qabto in Dowladda Sacuudigu ay u soo dhiibto Ra’iisulwasaare kheyre, Barnaamij isku dhufanaya Isaga iyo Madaxweyne Farmaajo, sida horey looga bartay Boqortooyadda Sacuudiga.
Dadka Odorasa arrimaha Siyaasadda ee Soomaaliya, ayaa Aaminsan in Boqortooyadda Sacuudiga ay Sabab u aheyd Khilaafyo soo kala dhex-galay Madaxweynayaashii iyo Ra’iisulwasaarayaashii soo maray Soomaaliya, kaddib markii ay si kala gaar ah ugu yeertay Labada dhinac oo ay u soo dhiibtay Barnaamijyo sababay inay Wada-shaqeyn waayaan.
Madaxdii ay Boqortooyaddu Isku dhufatay ayaa la Sheegaa inay kamid ahaayeen AUN Madaxweynihii Dowladii KMG aheyd ee Soomaaliya C/llaahi Yuusuf iyo Ra’iisulwasaarihiisii Cali Maxamed Geeddi, kuwaas oo mid walbaa ay gaar ugu yeertay.
Sidoo kale, Boqortooyadda ayaa Isku dhufatay Madaxweyne Xassan Sheekh iyo Ra’iisulwasaarayaashiisi Cumar C/rashiid iyo C/weli Sheekh Axmed, kaas oo ugu dambeyntii Ra’iisulwasaare C/weli ku tagay.
Si Kastaba ha ahaatee, Socdaalkan ayaa kusoo beegmaya Xilli Xasaasi ah oo ay Faraha ka baxday Xasiloonida Siyaasadeed ee Soomaaliya, Sidoo kalena uu jiro tuhuno badan oo uu qabo Ra’iisulwasaare Kheyre, kuwaas oo ah inuu Madaxweyne Farmaajo doonayo in Meesha uu ka saaro, si uu ugu badesho in uu helo Xasilooni Siyaasadeed oo uu Muddo Xileedkiisa ku dhameysto.
U Gaar Ah Idil News.